Voahangy Ranomasina Atsimo Indonezia - Gold South Sea Pearl Wholesale | Sea Pearl Dealer From Indonesia Pearl Farm | Tahitian Sea Pearl Wholesale | Moti Wholesale
Home / harga perhiasan mutiara lombok / Voahangy Ranomasina Atsimo Indonezia
Voahangy Ranomasina Atsimo Indonezia
Indonezia South Sea Pearl
Indonezia no vondronosy lehibe indrindra eran-tany misy jono sy vokatra an-dranomasina. Iray amin’ireo vokatra ireo ny perla South Sea, izay azo lazaina fa iray amin’ireo karazana perla tsara indrindra. Tsy vitan’ny hoe manana harena voajanahary manankarena ihany koa i Indonezia, manana mpanao asa tanana be dia be manana fahaiza-manao ambony.
Miaraka amin’ity lahatsoratra ity, mitondra vokatra Indoneziana manokana iray hafa izahay, ny perla South Sea. Amin’ny maha firenena eo amin’ny sampanan’ny ranomasimbe roa sy kaontinanta roa, ny kolontsaina Indoneziana dia mampiseho fifangaroan-javatra tsy manam-paharoa voaforon’ny fifaneraserana lava eo amin’ny fomba amam-panao vazimba teratany sy ny fitaomana avy any ivelany. Ny lova ara-kolontsaina manankarena ao Indonezia dia manolotra izao tontolo izao karazana asa tanana firavaka perla.
Iray amin’ireo mpilalao sangany eran-tany, Indonezia dia nanamboatra sy nanondrana perla ho any amin’ny tsena iraisam-pirenena, toa an’i Aostralia, Hong Kong, Japon, Korea Atsimo ary Thailand. Araka ny antontan’isa dia nitombo 19,69% ny sandan’ny fanondranana voahangy tamin’ny antsalany isan-taona nandritra ny taona 2008-2012. Tao anatin’ny dimy volana voalohany tamin’ny 2013, nahatratra 9,30 dolara amerikana ny sandan’ny fanondranana tapitrisa.
Ny perla avo lenta dia noheverina ho iray amin’ireo zava-tsarobidin’ny hatsarana nandritra ny taonjato maro, mitovy amin’ny vatosoa hafa. Ara-teknika, ny perla dia vokarina ao anatin’ny moluska velona misy akorandriaka, ao anatin’ny tavy malefaka na ny lamba.
Voahangy dia vita amin’ny karbôna kalsioma amin’ny endrika kristaly kely, toy ny akoran’ny tony, ao anaty sosona mivondrona. Ny perla tena tsara dia ho boribory sy malama tsara, saingy misy endrika maro hafa amin’ny perla, antsoina hoe perla baroque.
Satria ny perla dia vita amin’ny karbaona kalsioma voalohany indrindra, dia azo levona ao anaty vinaingitra izy ireo. Ny karbôna kalsioma dia mora voan’ny vahaolana asidra malemy satria ny kristaly ny karibonetra kalsioma dia mihetsika amin’ny asidra acetika ao anaty vinaingitra ka mamorona acetate calcium sy gazy karbonika.
Ny perla voajanahary mipoitra ho azy any anaty ala no tena sarobidy nefa tsy fahita firy. Ny voahangy misy eny an-tsena amin’izao fotoana izao dia kolontsaina na fiompiana avy amin’ny oyster perla sy betsimitsitekiteky ny ranomamy.
Ny perla sandoka koa dia be dia be novokarina ho firavaka tsy lafo na dia ambany lavitra noho ny voajanahary aza ny kalitao. Ny perla artifisialy dia manana iridescence mahantra ary mora manavaka amin’ny voajanahary.
Ny kalitaon’ny perla, na voajanahary na ambolena, dia miankina amin’ny maha-nacreous sy ny iridescent azy, toy ny ao anaty akorandriaka mamokatra azy. Raha ambolena sy jinjaina amin’ny ankapobeny ny perla mba hanaovana firavaka, dia nozairina tamin’ny akanjo raitra ihany koa izy ireo ary notorotoroina sy nampiasaina tamin’ny kosmetika, fanafody ary fangaro amin’ny loko.
Ny voahangy dia azo zaraina ho sokajy telo mifototra amin’ny fiforonany: voajanahary, kolontsaina ary fakan-tahaka. Talohan’ny fahavitan’ny perla voajanahary, zato taona teo ho eo izay, dia perla voajanahary avokoa ny perla hita.
Amin’izao fotoana izao, ny perla voajanahary dia tena tsy fahita firy, ary matetika amidy amin’ny lavanty any New York, London ary toerana iraisam-pirenena hafa amin’ny vidin’ny fampiasam-bola. Ny perla voajanahary, araka ny famaritana, dia karazana perla rehetra noforonina tsy nahy, tsy misy fitsabahan’ny olombelona.
Izy ireo dia vokatry ny kisendrasendra, miaraka amin’ny fiandohana izay mahasosotra toy ny parasy mandevina. Tena kely ny mety hisian’izany fisehoan-javatra voajanahary izany satria miankina amin’ny fidiran’ny akora avy any ivelany izay tsy azon’ny oyster avoaka amin’ny vatany.
Mitovy amin’izany koa ny perla kolontsaina iray. Raha ny perla voajanahary dia miasa irery ny oyster, fa ny perla kolontsaina kosa dia vokatry ny fitsabahan’ny olombelona. Mba hampirisihana ny oyster hamokatra perla, ny teknisianina iray dia ninia nametraka an’ilay ozy tao anatin’ilay oyster. Ny fitaovana apetraka amin’ny alalan’ny fandidiana dia akorandriaka antsoina hoe Renin’ny Voahangy.
Ity teknika ity dia novolavolain’ilay britanika biolojista William Saville-Kent any Aostralia ary nentin’i Tokichi Nishikawa sy Tatsuhei Mise tany Japon. Nomena ny patanty i Nishikawa tamin’ny 1916, ary nanambady ny zanakavavin’i Mikimoto Kokichi.
Afaka nampiasa ny teknolojian’i Nishikawa i Mikimoto. Taorian’ny nahazoana ny patanty tamin’ny 1916, ny teknolojia dia nampiharina avy hatrany tamin’ny akoya perla tao Japana tamin’ny 1916. Ny rahalahin’i Mise no voalohany namokatra perla ara-barotra tao amin’ny Akoya oyster.
Ny Baron Iwasaki an’ny Mitsubishi dia nampihatra avy hatrany ny teknolojia tamin’ny oyster perla South Sea tamin’ny 1917 tany Philippines, ary taty aoriana tany Buton, ary Palau. Ny Mitsubishi no voalohany namokatra perla kolontsaina ao amin’ny Ranomasina Atsimo – na dia tamin’ny taona 1928 aza no nahavitana ny vokatra ara-barotra voalohany tamin’ny perla.
Tantara hafa mihitsy ny perla maka tahaka. Amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny vakana fitaratra dia atsoboka ao anaty vahaolana vita amin’ny kirany trondro. Ity coating ity dia manify ary mety ho levona amin’ny farany. Mazàna ny olona iray dia afaka milaza fakan-tahaka amin’ny fanaikitra azy. Ny perla sandoka dia mitsambikina manerana ny nifinao, fa ny sosona nacre amin’ny perla tena izy dia mahatsiaro ho mavo. Ny Nosy Mallorca any Espaina dia malaza amin’ny indostrian’ny perla maka tahaka.
Misy endrika fototra valo ny perla: boribory, semi-boribory, bokotra, mitete, poara, oval, baroque ary boribory.
Ny perla boribory lavorary no endrika tsy fahita firy sy sarobidy indrindra.
Ny semi-boribory koa dia ampiasaina amin’ny rojo na amin’ny tapa-kazo izay azo adika ny endriky ny perla mba ho toy ny perla boribory tsara.
Ny perla bozaka dia toy ny perla boribory somary fisaka ary afaka manao rojo ihany koa, fa matetika ampiasaina amin’ny pendants na kavina tokana izay rakotra ny antsasaky ny perla aoriana, ka mahatonga azy ho toy ny perla lehibe kokoa sy boribory.
Ny perla mitete sy miendrika poara indraindray dia antsoina hoe perla mitete ranomaso ary matetika hita amin’ny kavina, pendants, na perla afovoany ao anaty rojo.
Ny perla Baroque dia manana endrika hafa; matetika izy ireo dia tena tsy ara-dalàna miaraka amin’ny endrika miavaka sy mahaliana. Hita matetika amin’ny rojo koa izy ireo.
Ny voahangy boribory dia miavaka amin’ny havoana mivondrona, na peratra manodidina ny vatan’ny perla.
Eo ambanin’ny System Harmonized (HS), ny perla dia mizara ho sokajy telo: 7101100000 ho an’ny perla voajanahary, 7101210000 ho an’ny perla kolontsaina, tsy miasa ary 7101220000 ho an’ny perla kolontsaina, niasa.
Ny famirapiratry ny voahangy INDONESIA
Nandritra ny taonjato maro, ny perla voajanahary ao amin’ny Ranomasina Atsimo dia noheverina ho toy ny lokan’ny perla rehetra. Ny fahitana ny farafara perla any amin’ny Ranomasina Atsimo indrindra indrindra any Indonezia sy ny faritra manodidina, toa an’i Aostralia Avaratra tamin’ny fiandohan’ny taona 1800, dia niafara tamin’ny vanim-potoanan’ny perla tena nahafinaritra indrindra tany Eoropa nandritra ny vanim-potoanan’ny Victoriana.
Ity karazana perla ity dia miavaka amin’ny perla hafa rehetra noho ny nacre voajanahary matevina mahafinaritra. Ity nacre voajanahary ity dia mamokatra famirapiratana tsy manam-paharoa, izay tsy vitan’ny hoe “mamirapiratra” toy ny amin’ny perla hafa, fa endrika malefaka sy tsy azo tsapain-tanana izay manova ny toe-po ao anatin’ny toe-pahazavana samihafa. Ny hakanton’ity nacre ity izay nankafizin’ny perla any amin’ny Ranomasina Atsimo ho an’ireo mpanao firavaka manana tsiro manavakavaka nandritra ny taonjato maro.
Novokarin’ny iray amin’ireo oyster be perla lehibe indrindra, ny Pinctada maxima, fantatra amin’ny anarana hoe Silver-Lipped na Gold-Lipped oyster. Ity mollusc molotra volafotsy na volamena ity dia mety hitombo amin’ny haben’ny lovia fisakafoanana nefa tena saro-pady amin’ny tontolo iainana.
Izany fahatsapana izany dia manampy amin’ny vidiny sy ny tsy fahampian’ny perla any amin’ny Ranomasina Atsimo. Noho izany, ny Pinctada maxima dia mamokatra perla lehibe kokoa manomboka amin’ny 9 milimetatra ka hatramin’ny 20 milimetatra amin’ny salan’isa manodidina ny 12 milimetatra. Noho ny hatevin’ny nacre, ny perla South Sea dia malaza amin’ny karazana endrika tsy manam-paharoa sy mahafinaritra hita.
Ankoatra ireo hatsaran-toetra ireo, ny perla South Sea dia manana loko maromaro manomboka amin’ny crème ka hatramin’ny mavo ka hatramin’ny volamena lalina ary avy amin’ny fotsy ka hatramin’ny volafotsy. Ny perla koa dia mety haneho “overtone” mahafinaritra amin’ny loko hafa toy ny mavokely, manga na maitso.
Amin’izao fotoana izao, toy ny amin’ny perla voajanahary hafa, ny perla voajanahary amin’ny Ranomasina Atsimo dia saika nanjavona tsy ho eo amin’ny tsenan’ny perla maneran-tany. Ny ankamaroan’ny perla any amin’ny Ranomasina Atsimo misy ankehitriny dia ambolena any amin’ny toeram-piompiana perla any amin’ny Ranomasina Atsimo.
Amin’ny maha mpamokatra azy, Indonezia, dia afaka manombantombana ny hatsaran-tarehiny amin’ny lafiny famirapiratana, loko, habe, endrika ary kalitao ambonin’ny tany. Ny voahangy misy loko mijoalajoala amin’ny Imperial Gold dia avy amin’ny oysters ambolena ao amin’ny ranon’i Indonezia ihany. Eo amin’ny famirapiratana, ny perla avy amin’ny Ranomasina Atsimo, na voajanahary na kolontsaina, dia manana endrika miavaka.
Noho ny famirapiratany voajanahary tsy manam-paharoa, dia mampiseho famirapiratana malefaka ao anaty izy ireo izay tsy mitovy amin’ny famirapiratry ny perla hafa. Indraindray dia lazaina fa mampitaha ny famirapiratry ny labozia amin’ny jiro fluorescent.
Indraindray, ny perla tena tsara dia mampiseho tranga iray antsoina hoe orient. Ity dia fitambaran’ny famirapiratana mangarahara miaraka amin’ny taratry ny loko. Ny loko mamirapiratra indrindra amin’ny perla amin’ny Ranomasina Atsimo dia fotsy na fotsy misy loko isan-karazany.
Mety ho saika lokon’ny avana ny overtones, ary azo avy amin’ny loko voajanahary amin’ny nacre an’ny oyster perla South Sea. Rehefa ampiarahina amin’ny famirapiratana mahery vaika mangatsiatsiaka izy ireo dia mamorona ny vokatra fantatra amin’ny anarana hoe “orient”. Ny loko tena hita dia ahitana, Silver, White Pink, White Rose, Golden White, Gold Cream, Champagne ary Imperial Gold.
Ny loko volamena imperial no tsy fahita firy amin’ny rehetra. Io loko mijoalajoala io dia avy amin’ny oysters ambolena ao amin’ny ranon’i Indonezia ihany. Ny perla kolontsaina any amin’ny Ranomasina Atsimo dia ambony noho ny habeny, ary amin’ny ankapobeny dia eo anelanelan’ny 10mm sy 15 milimetatra.
Rehefa hita ny habe lehibe kokoa, ny perla tsy fahita firy mihoatra ny 16 milimetatra ary indraindray mihoatra ny 20 milimetatra dia tena tian’ny mpandalina. Raha ny hatsaran-tarehy no eo imason’ny mpijery, dia ny South Sea Pearls dia manolotra fahafahana tsara tarehy hojerena, satria tsy misy perla roa mitovy. Noho ny hatevin’ny nacre azy, dia hita amin’ny endrika isan-karazany ny perla kolontsaina ao amin’ny Ranomasina Atsimo.
Pearl nacre dia matrix tsara tarehy misy kristaly karbôna kalsioma sy akora manokana novokarin’ny oyster. Ity matrix ity dia apetraka ao anaty taila mikroskopika miforona tsara, sosona miampy sosona. Ny hatevin’ny perla dia voafaritra amin’ny isan’ny sosona, ary ny hatevin’ny sosona tsirairay.
Ny endriky ny nacre dia hamaritra raha “flat” na “prismatic” ny kristaly kalsioma, amin’ny fahalavorariana izay ametrahana ny taila, ary amin’ny fahamendrehana sy ny isan’ny sosona taila. Ny vokany
amin’ny hatsaran’ny perla dia miankina amin’ny haavon’ny fahitana ireo fahalavorariana ireo. Ity kalitaon’ny perla ity dia voalaza fa ny fihodiran’ny perla.
Na dia tsy misy fiantraikany amin’ny kalitaon’ny perla aza ny bika, dia misy fiantraikany amin’ny sandany ny fitakiana endrika manokana. Ho fanamorana, sokajiana ho sokajy fito ireo perla kolontsaina ao amin’ny Ranomasina Atsimo. Ny sokajy maromaro dia mizara ho sokajy maromaro:
Ny hatsaran-tarehin’ny mpanjakavavin’ny South Sea Pearl
Indonezia dia mamokatra voahangy amin’ny ranomasina Atsimo izay ambolena avy amin’ny Pinctada maxima, karazana oyster lehibe indrindra. Amin’ny maha vondronosy manana tontolo madiodio, Indonezia dia manome tontolo tsara indrindra ho an’ny Pinctada maxima hamokarana perla avo lenta. Ny Pinctada maxima any Indonezia dia mamokatra perla misy loko mihoatra ny ampolony.
Ny perla tsy fahita firy sy sarobidy indrindra vokarina dia ireo misy loko volamena sy volafotsy. Karazana alokaloka marefo isan-karazany, ankoatry ny hafa, volafotsy, champagne, fotsy mamirapiratra, mavokely ary volamena, miaraka amin’ny perla volamena imperial izay tsara tarehy indrindra amin’ny perla rehetra.
Ny Pearl Gold Color Pearl vokarin’ny oysters ambolena ao amin’ny rano madio Indoneziana no tena misy ny Queen of South Sea Pearl. Na dia ny ranon’i Indonezia aza no fonenan’ny perla any amin’ny Ranomasina Atsimo, dia ilaina ny mifehy ny varotra an-trano sy ny fanondranana mba hahazoana antoka ny kalitao sy ny vidin’ny perla. Ny governemanta sy ny antoko mifandraika dia manana
nanangana fifandraisana matanjaka kokoa hamahana ny fanamby.
Mikasika ny voahangy sinoa, izay kolontsaina avy amin’ny betsimitsitekiteky ny rano madio ary ahiana ho ambany naoty, dia nisy fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana toy ny famoahana ny didy hitsivolana laharana faha-8/2003 momba ny fanaraha-maso ny kalitaon’ny voahangy. Ilaina ny fandrefesana toy ny perla sinoa izay ambany kalitao nefa tena mitovy amin’ny perla Indoneziana. Mety ho lasa loza mitatao ho an’ny foibe famokarana perla Indoneziana any Bali sy Lombok.
Ny fanondranana perla Indoneziana dia nampiseho fisondrotana lehibe tamin’ny vanim-potoana 2008-2012 miaraka amin’ny fitomboana isan-taona eo ho eo amin’ny 19,69%. Tamin’ny taona 2012, ny ankamaroan’ny fanondranana dia voahangy voajanahary 51%.22. Voahangy kolontsaina, tsy niasa, nanaraka teo amin’ny faharoa lavitra tamin’ny 31,82% ary ny voahangy kolontsaina, niasa, tamin’ny 16,97%.
Ny fanondranana perla any Indonezia tamin’ny taona 2008 dia nitentina 14,29 tapitrisa dolara monja talohan’ny nitombo be ho 22,33 tapitrisa dolara tamin’ny 2009.
Sary 1. Fanondranana voahangy Indoneziana (2008-2012)
Nitombo ho 31,43 tapitrisa dolara amerikana ary 31,79 tapitrisa dolara amerikana tamin’ny taona 2010 sy 2011. Ny fanondranana anefa dia nihena ho 29,43 tapitrisa dolara amerikana tamin’ny taona 2012.
Nitohy nandritra ny dimy volana voalohany tamin’ny taona 2013 ny firongatry ny fihenan’ny ankapobeny tamin’ny fanondranana 9,30 tapitrisa dolara amerikana, fihenam-bidy 24,10% raha oharina tamin’ny 12,34 tapitrisa dolara amerikana tamin’ny taona 2012.
Sary 2. Toerana fanondranana Indoneziana (2008-2012)
Tamin’ny taona 2012, ny toerana fanondranana lehibe indrindra ho an’ny perla Indoneziana dia Hong Kong, Aostralia ary Japon. Ny fanondranana tany Hong Kong dia 13,90 tapitrisa dolara amerikana na 47,24% amin’ny totalin’ny fanondranana perla Indoneziana. Japana no toerana fanondranana faharoa lehibe indrindra amin’ny US $ 9,30 tapitrisa (31,60%) ary arahin’i Aostralia miaraka amin’ny US $ 5,99 tapitrisa (20,36%) ary Korea Atsimo manana US $ 105,000 (0,36%) ary Thailand miaraka amin’ny US $ 36,000 (0,12%).
Tao anatin’ny dimy volana voalohany tamin’ny 2013, i Hong Kong indray no toerana voalohany indrindra tamin’ny fanondranana perla 4,11 tapitrisa dolara amerikana, na 44,27%. Nisolo an’i Japana teo amin’ny laharana faharoa i Aostralia tamin’ny 2,51 tapitrisa dolara amerikana (27,04%) ary fahatelo i Japana tamin’ny 2,36 tapitrisa dolara amerikana (25,47%) ary nanaraka an’i Thailandy tamin’ny 274,000 dolara amerikana (2,94%) ary Korea Atsimo nahazo 25,000 dolara amerikana (0,27%).
Na dia nampiseho fitomboana isan-taona miavaka 124,33% tamin’ny vanim-potoana 2008-2012 aza i Hong Kong, dia nihena 39,59% ny fitomboana tao anatin’ny dimy volana voalohany tamin’ny taona 2013 raha oharina tamin’ny vanim-potoana mitovy tamin’ny 2012. Ny fanondranana any Japon koa dia nahitana fihenam-bidy mitovy amin’ny 35,69. %
Sary 3. Fanondranana Indoneziana araka ny faritany (2008-2012)
Ny ankamaroan’ny fanondranana perla Indoneziana dia avy any amin’ny faritanin’i Bali, Jakarta, Sulawesi Atsimo, ary Nusa Tenggara Andrefana izay mitentina 1.000 dolara amerikana ka hatramin’ny 22 tapitrisa dolara amerikana.
Sary 4. Fanondranana voahangy, nat na cult, sns To World by Country (2012)
Ny totalin’ny fanondranana perla maneran-tany tamin’ny taona 2012 dia nahatratra 1,47 lavitrisa dolara amerikana izay latsaka 6,47% raha oharina amin’ny tarehimarika fanondranana tamin’ny 2011 izay 1,57 lavitrisa dolara amerikana. Tamin’ny vanim-potoana 2008-2012, ny salan’isa isan-taona dia nihena 1,72%. Tamin’ny 2008, nahatratra 1,75 lavitrisa dolara amerikana ny fanondranana perla eran-tany, saingy nihena ny taona nanaraka. Tamin’ny taona 2009, nihena ho 1,39 lavitrisa dolara amerikana ny fanondranana entana alohan’ny niakatra ho 1,42 lavitrisa dolara amerikana ary 157 lavitrisa dolara amerikana tamin’ny 2010 sy 2011.
Hong Kong no mpanondrana ambony indrindra tamin’ny taona 2012 miaraka amin’ny 408,36 tapitrisa dolara amerikana ho an’ny tsenan’ny 27,73%. Faharoa i Shina tamin’ny fanondranana 283,97 tapitrisa dolara amerikana izay nahaforona 19,28% amin’ny tsena, arahin’i Japana tamin’ny 210,50 tapitrisa dolara amerikana (14,29%), Aostralia tamin’ny fanondranana 173,54 tapitrisa dolara amerikana (11,785) ary Polinezia frantsay izay nanondrana 76,18 tapitrisa dolara (76,18 tapitrisa dolara). 5.17%) hamaranana ny Top 5.
Teo amin’ny laharana faha-6 i Etazonia izay nanondrana 65,60 tapitrisa dolara amerikana ho an’ny ampahany amin’ny tsena 4,46% arahin’i Soisa tamin’ny 54,78 tapitrisa dolara amerikana (3,72%) ary i United Kingdom izay nanondrana 33,04 tapitrisa dolara amerikana (2,24%). Tamin’ny fanondranana perla mitentina 29,43 tapitrisa dolara amerikana, laharana faha-9 i Indonezia tamin’ny 2% ny tsenan’ny tsena raha i Filipina kosa nahavita ny lisitra Top 10 tamin’ny fanondranana 23,46 tapitrisa dolara amerikana (1,59%) tamin’ny taona 2012.
Sary 5. Fizarana sy fitomboan’ny fanondranana maneran-tany (%)
Tamin’ny vanim-potoana 2008-2012, Indonezia dia manana fironana fitomboana avo indrindra amin’ny 19,69% arahin’i Filipina amin’ny 15,62%. Shina sy Etazonia no hany fanondranana hafa izay niaina fironana fitomboana tsara tamin’ny 9% sy 10.56% tsirairay avy amin’ireo firenena 10 ambony.
Indonezia, na izany aza, dia nijaly tamin’ny fihenan’ny 7,42% isan-taona teo anelanelan’ny 2011 sy 2012 miaraka amin’i Filipina izay manana fitomboana lehibe indrindra isan-taona amin’ny 38,90% ary Aostralia no mpilalao ratsy indrindra izay nahatratra 31,08%.
Ankoatra an’i Aostralia, ny hany firenena ao anatin’ny 10 ambony indrindra mpanondrana izay nandrakitra ny fitomboan’ny fanondranana perla dia.
Etazonia nitombo 22,09%, Royaume-Uni 21,47% ary Soisa 20,86%.
Nanafatra perla 1,33 lavitrisa dolara amerikana izao tontolo izao tamin’ny taona 2012, na 11,65% ambany noho ny isan’ny fanafarana 1,50 miliara dolara amerikana tamin’ny 2011. Nandritra ny taona 2008-2011, nihena 3,5% isan-taona ny fanafarana entana. Ny fanafarana perla maneran-tany dia nahatratra ny avo indrindra tamin’ny 2008 tamin’ny 1,71 lavitrisa dolara amerikana talohan’ny nihena ho 1,30 dolara amerikana.
Sary 6. Fanafarana voahangy, nat na cult, sns Avy amin’izao tontolo izao
lavitrisa tamin’ny taona 2009. Ny fanafarana dia nampiseho fironan’ny fihenam-bidy tamin’ny taona 2010 sy 2011 tamin’ny 1,40 lavitrisa dolara amerikana sy 1,50 lavitrisa dolara amerikana tsirairay avy, talohan’ny nitotongana ho 1,33 dolara amerikana tamin’ny 2012.
Teo amin’ireo mpanafatra, Japon no voalohany tamin’ny lisitra tamin’ny taona 2012 tamin’ny fanafarana perla mitentina 371,06 tapitrisa dolara amerikana ho an’ny tsenan’ny 27,86% amin’ny fitambaran’ny fanafarana perla eran-tany izay mitentina 1,33 lavitrisa dolara amerikana. Faharoa i Hong Kong tamin’ny fanafarana 313,28 tapitrisa dolara amerikana ho an’ny tsenan’ny 23,52%, arahin’i Etazonia tamin’ny 221,21 tapitrisa dolara (16,61%), Aostralia tamin’ny 114,79 tapitrisa dolara (8,62%) ary Soisa teo amin’ny laharana faha-5 lavitra. fanafarana US $47.99 (3.60%).
Voahangy 8.000 dolara amerikana ihany no nafarana Indonezia tamin’ny taona 2012 ary eo amin’ny laharana faha-104.
Navoakan’ny : DIRECTORAT GENERAL DEVELOPMENT OF EXPORT NATIONAL. Minisiteran’ny Varotra Repoblikan’i Indonezia.
Previous post: Јужноморскиот бисер Индонезија
Next post: Mutiara Laut Selatan Indonesia